निरन्तर १४ दिन घटेको बजार बिहीवार भने साढे १२ अंकले बढ्यो, अब बजार कता जाला त ? | आर्थिक अभियान
निरन्तर १४ दिन घटेको बजार बिहीवार भने साढे १२ अंकले बढ्यो, अब बजार कता जाला त ?
असार २, काठमाडौं । विगत १४ दिनदेखि निरन्तर घटेको बजार बिहीवार भने १२ दशमलव ५७ अंकले बढेर बन्द भएको छ ।
नेप्से परिसूचक १ हजार ९७८ दशमलव ९४ विन्दुमा पुगेको हो । कारोबारमा आएका २२१ धितोपत्रको ३५ लाख ९४ हजार ५९४ कित्ता शेयर २५ हजार ५८५ पटकमा रू. १ अर्ब १८ करोड ७१ लाख ४५ हजार ५१८ दशमलव ६५ बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । ३ हजार २०० पुगको बजार अहिले १ हजार ९०० विन्दु वरिपरि झरेको छ ।
लगानीकर्ताले अर्बौ गुमाएका छन् । यस्तो अवस्थामा नियामक निकायले लगानीकर्ताको हकहितमा केही नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सोही कारण अहिले लगानीकर्ताहरु आन्दोलनमा रहेका छन् । हालसम्म पनि नियामक निकायले लगानीर्ताको हकहितमा केही काम गरेको छैन । लगानीकर्ता अब बजार कता जान्छ भन्ने अन्योलमा परेका छन् ।
यद्धपि लगानीकर्ताले पनि शेयर बजार घटबढ भइरहन्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । यसोत लगानीकर्ताहरुले पनि लगानी गर्नुपूर्व कम्पनीको आधारभूत पक्ष र प्राविधिक पक्ष राम्रोसँग केलाएर लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने गर्दछ ।
कारोबारमा आएका २२१ धितोपत्रमध्ये दुई कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य १० प्रतिशत र रिभर फल्स पावरको ९ दशमलव ९७ प्रतिशतका दरले बढेसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।
आँधीखोला लघुवित्तको शेयरमूल्य रू. ५४२ दशमलव ५० र रिभर फल्स पावरको रू. २९० दशमलव २० पुगेको हो । रिभर फल्स पावरको आईपीओ धितोपत्रको दोस्रो बजारमा बिहीवारदेखि मात्र आएको हो सोही कारण कम्पनीको शेयरमा खरीदकर्ता आकर्षित भएका हुन् ।
बिहीवार लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयरमूल्य सबैभन्दा बढी ३ दशमलव ८० प्रतिशत घटेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ४०५ मा झरेको हो । त्यसैगरी दोस्रोमा राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य ३ दशमलव ४१ प्रतिशत घटेर रू. ८२२ कायम भएको छ ।
बिहीवार सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको भएको हो । कम्पनीको रू. १३ करोड ८८ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री गर्ने दोस्रो कम्पनीमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकको रू. १० करोड ३५ लाख बराबरको भएको हो ।
साताको पहिलो दिन ५७.६५ अंकले बढ्यो नेप्से, २ अर्ब ४८ करोडको शेयर खरीदविक्री [२०७९ असार, १९]
सातामा बजारका सबै सूचक सकारात्मक, लगानीकर्ताको सम्पत्ति २ खर्बभन्दा बढीले वृद्धि [२०७९ असार, १८]